अन्तराष्ट्रिय Archives - Rising Dainik
July 27, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on आफ्नै पसलमा काम गर्ने युवती राम्रो लागेपछि एक सयमा पसल बेचेर हिँडेपछि…
हरेक कम्पनी वा पसलेले काममा सहजताकालागि मजदुर वा कर्मचारी राख्ने गर्दछन् । यस बापत कम्पनीले उनीहरुलाई समझदारी वा कम्पनीको नियम अनुसार तलव वा पारिश्रमिक दिने गर्दछन् । काम मन परेमा प्रमोशन वा तलब बढाउने गरीन्छ । तर एक मालिकले भने कर्मचारीको कामबाट यति प्रभावित भए कि उनले कर्मचारीलाई नै पसल बेचिदिए । अमेरिकाको कनेक्टिकनमा एक […]
सुपर डान्सरको जजमा करिश्मा कपूरको ‘इन्ट्री’, रियालिटि शो सुपर डान्स बाट हटिन शिल्प शेट्टी
July 27, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on सुपर डान्सरको जजमा करिश्मा कपूरको ‘इन्ट्री’, रियालिटि शो सुपर डान्स बाट हटिन शिल्प शेट्टी
रियालिटि शो सुपर डान्सर ४ टिभीको सबैभन्दा हिट रियलिटी शो मध्ये एक हो। यस कार्यक्रमले शुरू देखि फ्यानहरूलाई निकै मनोरञ्जन दिएको छ । शो मा, साना बच्चाहरु नृत्य गर्छन । प्रतियोगीहरु को नृत्य प्रतिभाले सबैलाई मनोरञ्जन दिएको छ । यस वर्ष शोमा सामेल भएका सबै प्रतियोगीहरू तिनीहरूको शैलीमा उत्कृष्ट छन्, जसको खतरनाक नृत्यले मानिसहरूलाई मुग्ध […]
July 27, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on अब फेसबुकमा नयाँ दुनिया पाईने, एकै ठाउँमा प्रत्यक्ष रुपमा बोलेकोजस्तै आभास हुने
मार्क जुकरबर्गले आगामी पाँच वर्ष भित्र फेसबुकलाई सामाजिक संजाल नेटवर्कबाट ‘मेटाभर्स कम्पनी’ बनाउने योजना बनाएका छन्। मेटाभर्स भनेको अनलाईनको भर्चुअल दुनियाँ हो जहाँ मानिसले भर्चुअल रुपमै भीआर हेडसेट लगाएर गेम खेल्न सक्छन्, संचार गर्न सक्छन् भने काम पनि गर्न सक्छन्। फेसबुकका संस्थापक तथा कार्यकारी अधिकृत जकरबर्गका अनुसार फेसबुकको भर्चुअल दुनियाँमा फेसबुकका सामग्री मात्र देखिँदैन आफू […]
चर्चित बलिउड अभिनेता सोनू सूद सडक किनारमा रोटी बनाउँदै गरेको भेटिए , भिडियो भयो एकै छिनमा भाइरल (भिडियो सहित)
July 27, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on चर्चित बलिउड अभिनेता सोनू सूद सडक किनारमा रोटी बनाउँदै गरेको भेटिए , भिडियो भयो एकै छिनमा भाइरल (भिडियो सहित)
काठमाडौँ / कोरोनाकालमा अलपत्र परेका अनगिन्ती ब्यक्तिहरुलाई उनीहरुको घर सम्म पु¥याईदिएर चर्चामा आएका बलिउड अभिनेता सोनू सूद सामाजिक सञ्जालमा एकदमै चर्चा कमाईरहेका छन् । उनले यो लकडाउनको समयमा बेसहारा ब्यक्तिहरुलाई धेरै सहयोग गरिरहेका छन् । उनी बलिउडको पर्दामा भिलेनको रुपमा देखिए पनि जनताको बीचमा रियल लाइफको हिरोको भुमिकामा देखिईरहेका छन् । सोनू धेरैलाई सहयोग गर्नुका […]
मासिक दुई लाख तलव, इजरायलमा खुल्यो रोजगारी: के के चाहिन्छ योग्यता ?
July 27, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on मासिक दुई लाख तलव, इजरायलमा खुल्यो रोजगारी: के के चाहिन्छ योग्यता ?
काठमाडौं । इजरायलका लागि नेपाली कामदार माग गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले आज सूचना जारी गर्दै केयरगिभरका लागि आवेदन खुलेको जनाएको हो । विभागले जारी गरेको सूचनामा २१ दिनभित्र विभागको वेभसाइट https://ferms.dofe.gov.np/israel/login मा अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछ । इजरायलले पहिलो चरणमा एक हजार कामदार लैजाने भएको हो । विभागका अनुसार ७० प्रतिशत महिला र […]
July 27, 2021 July 27, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on नेपालकी छोरी हुँ म’ भन्दै सबैलाई नचाउने यी इण्डियन आइडलका प्रति`योगी पवनदीपकी बहिनी ज्योति, यति सुमधुर छ स्वर (भिडियो हेर्नु`होस्)
पवनदीप राजन बिश्व`भरीका हिन्दी नेपाली गीत संगीत मन पराउने दर्शक श्रोताबिच परिचित नाम हो । तर उनकी बहिनी ज्योति`लाई धेरैले नचिन्न सक्छन् । ज्योतिका अगाडि प्रतिभा`लाई उमेरले छेकेन । इण्डियन आइडलका प्रतियोगी पवनदीप रिय`लिटी शो द भ्वाइस अफ इंडि`याको पहिलो सत्रका विजेता पनि हुन् । उनकी बहिनी ज्योति राजन पनि पवन|दीपकै बाटोमा छिन् । हुन […]
July 27, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on नेपालबाट १ हजार कामदार लैजाँदै इजरायल, १० कक्षा पास पनि जान पाउने !
काठमाडौं । नेपालसँग सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि कामदार लैजान आनाकानी गरिरहेको इजरायलले नेपाली श्रमिक लैजान इच्छा देखाउँदै १ हजार जना श्रमिकको माग गरेको छ ।वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार इजरायलले सुसारे (केयरगिभर) कामका लागि हजार नेपाली श्रमिक लैजान खोजेको हो । कोरोना म’हामारीका कारण अवस्था असामान्य नभएमा इजरायलले मागेको श्रमिकका लागि एक÷डेढ हप्ताभित्र विज्ञापन खुलाएर […]
कला क्षेत्र फेरी शो’कमा, मशहुर अभिनेत्री जयंती निदाएकै बेला अ’स्ताइन्
July 26, 2021 July 26, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on कला क्षेत्र फेरी शो’कमा, मशहुर अभिनेत्री जयंती निदाएकै बेला अ’स्ताइन्
एजेन्सी । सोमबार बिहान सिनेमा प्रेमीहरूको लागि दुखद समाचार सार्वजनिक भयो । प्रख्यात कन्नड़ अभिनेत्री जयंतीको नि’धन सोमवार विहानै भएको छ। उनले १०० भन्दा बढी फिल्ममा अभिनय गरेकी थिइन् । जयंतीका छोरा कृष्ण कुमारले अभिनेत्रीको मृ’त्यु भएको पुष्टि गरेका छन्। उमेर सम्बन्धी समस्याले उनी घरवाहिर पनि निस्कन सक्थिनन् । उनी घरमै निदाएकै अवस्थामा कहिल्यै नब्युँझिने […]
July 26, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on इजरायलले माग्यो हजारौ नेपाली कमदार, पहिलो चरणमा कति र कहिले जादैछन ?
काठमाडौँ । इजरायलमा सुसारे (केयरगिभर) रूपमा एक हजार नेपाली दक्ष श्रमिकको माग आएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार इजरायलबाट सरकारी तवरबाट केयरगिभरको माग आएको हो । विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले इजरायल र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार इजरायलबाट एक हजार केयरगिभरका लागि माग आइसकेकाले सामान्य अवस्था रहेमा अबको एक÷डेढ हप्ताभित्र विज्ञापन खुल्ने जानकारी दिए । […]
कतार प्रवेश गर्नेका लागि अब नयाँ नियम, दुतावासको विज्ञप्तीमा के छ ?
July 26, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on कतार प्रवेश गर्नेका लागि अब नयाँ नियम, दुतावासको विज्ञप्तीमा के छ ?
काठमाडौँ । म’हामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएका छन् । नेपाल फर्किएकाहरु अब फेरी काममा जान पाएका छैनन् । टिकट लिएकाहरु पनि रोजगारदाता मुलुकले जारी गरेको अनेक नियमका कारण अप्ठेरोमा छन् । तर कतारले भने केही सजिलो नियम बनाएको छ । परिवर्तित नियम अनुसार खोप लगाएको १४ दिनपछि कतार प्रवेश गर्नेहरूले […]